Brook Rothshank dia mitondra antsika amin'ny zavatra madinidinika ao amin'ny sary hosodoko | Famoronana an-tserasera
Ilay bitika ao amin'ny sary hosodoko Brook Rothshank
Miaraka amin'i Brook Rothshank dia miatrika mpanakanto iray izahayiraika ambin'ny folo taona lasa izay dia nanam-bintana nanatrika fampirantiana izy nataon'i Tom Bishop izay nanehoana ny sangan'asa tamina endrika manokana, ny kely indrindra amin'ny sary sy sary hosodoko. Rothshanks dia namporisihan'ny reniny hitondra ny talentany amin'ny sehatra matihanina rehefa efa nandalo ny asan'ny solika sy acrylic izy.
Izany no antony anànantsika azy io amin'ity sehatra virtoaly fantatsika avy amin'ny Creativos Online ity ary tianay ny hanasongadinana ireo mpanakanto toa an'i Rothshank. Nandia sekoly tany Castine, Maine izy, izay nahafahany nianatra manatsara ny teknikao amin'ny famoronana sary izany dia misy ifandraisany amin'ny bitika sy kely. Ity ampahany amin'ny asan'izy ireo.
Araka ny nambarany, tamin'ny 2014 dia nanana olana tamin'ny fitadiavana fotoana kely izy, noho ny zanany roa, ny iray 7 taona ary ny roa hafa, mba hamporisihana ny tenany hahomby kokoa hoy izy mamorona zavatra kely isan'andro. Izany dia nanjary afaka nanao asa kely kokoa misy kalitao avo kokoa ary afaka nandoko iray isan'andro tsy nisy olana lehibe.
Ny tsirairay amin'ireo fialamboly kely ireo dia afaka maka eo anelanelan'ny 45 minitra sy 4 ora, ary araka ny ahitanao ny refy dia 1/12 ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Ny rantsan-tanany dia manamarika ny refy misy an'ireo sary hosodoko kely ireo.
fampiasana taratasy fotsy canson ao amin'ny fanontana «antitra» ary borosy tsara handinihana ny tsirairay amin'ireo firaketana kely sy avo lenta ireo. Mampiasa ny iPhone-nany izy haka ny sary nozarainy taty aoriana tao amin'ny Instagram izay ananany mpanaraka 68.300 ary toerana ahazoany asa, na dia tsy azo atao aza izany amin'izao fotoana izao, na dia nilaza aza izy fa amin'ny 2017 dia hiverina aminy izy.
Ianao dia manana ny instagram for araho ny asanao bitika ary amin'ny fanamboarana lehibe. Raha tianao ilay bitika, avia eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ilay bitika ao amin'ny sary hosodoko Brook Rothshank
Ahoana ny fomba hiainana amin'ny fomba mahasalama amin'ny fomba fiaina mipetrapetraky ny mpamorona sary